Thola ukuthi yini ongayibona edolobheni laseWales iCardiff | Bezzia
Yini ongayibona edolobheni laseWales iCardiff
USusana Garcia | 31/03/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
La Idolobha laseWales iCardiff linesikhungo esingumlando kepha futhi kusuka endaweni yesimanje. Inhlokodolobha yaseWales nedolobha elincane, elingavakashelwa ngezinyawo nangesikhathi esifushane, likwenza ume kahle izinsuku ezimbalwa. Isivikelo sokuqala kule ndawo sisukela ezikhathini zamaRoma futhi nanamuhla sisalokhu sigcina isigodlo saso esimangalisayo, esingesinye sezingxenye ezibaluleke kakhulu futhi ezibalulekile.
Lona idolobha linendawo ethekwini, okwenze kwaba yindawo esebenzayo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi seNguquko Yezimboni yakhula kakhulu, njengoba yaba yindawo enkulu yamalahle aseBrithani, iphuzu elibalulekile. Namuhla kungumuzi ozinikele kakhulu kwezokuvakasha osinikeza izindawo eziningi zokuzibona.
1 Inqaba yaseCardiff
2 ICardiff city hall
3 ICardiff National Museum
4 Ipaki le-Bute
5 IRoyal Arcade
6 Imakethe Ephakathi YaseCardiff
Yilokho iphuzu elibaluleke kakhulu ukubona edolobheni laseCardiff. Inqaba inemvelaphi kaNorman, yize ivuselelwe ngokuhamba kwesikhathi. Ukulungiswa okuningi kungenxa yalokhu okwenziwa ngekhulu le-XNUMX ukuze ukwazi ukubona isitayela esithile se-eclectic. Isigodlo sihlala egqumeni elincane futhi sinikeza ukuvakashelwa okumnandi, kunemihlahlandlela yomsindo etholakalayo. Kungenzeka ukubona imidwebo ye-fresco, izakhiwo zamapulangwe namakamelo ahlukene azosimangaza ngezingxube zawo. Ngaphezu kwalokho, ungakhuphuka iClock Tower ukuze ujabulele imibono.
ICardiff city hall
Ihholo ledolobha i- isakhiwo esikhulu esiheha ukunakwa, ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili. Kungenzeka uvakashele ngaphakathi kwamakamelo avulekile, ngakho-ke kungaba ukuvakasha okuthakazelisayo. Ungabona igumbi elibizwa ngeMarble elinemifanekiso yabantu ababalulekile emlandweni waseWales. Kungenzeka ukuthi sibone neGumbi loMkhandlu noma ihholo, amakamelo ahlotshiswe ngokucophelela okukhulu.
ICardiff National Museum
Lesi sakhiwo siseduze neCardiff City Hall, ngakho-ke singavakashelwa ngokushesha. Kuyisakhiwo se isitshalo se-neoclassical esihlala umnyuziyamu kazwelonke. Ingumnyuziyamu lapho sithola khona imibukiso enhlobonhlobo, ngakho-ke imvamisa ilungile ukuhamba nomndeni futhi sibe nesikhathi esimnandi nesifundisayo. Singathola kusuka embukisweni wesayensi yemvelo noma i-zoology kuya emisebenzini ebalulekile ngababhali abanjengoVan Gogh noma uRodin. Kukhona nendawo yezingane, ukuze zikwazi ukujabulela isayensi ngendlela esebenzayo nejabulisayo.
Ku inhliziyo kaCardiff sithola iBaute Park enhle, ipaki yasemadolobheni yobuhle obukhulu eduzane nenqaba enweba eduze noMfula iTaff. Indawo enhle yokuphumula nokwenza imigwaqo ehlukene edabula kuyo, ngezinyawo noma ngebhayisikili. Esikhungweni sayo kunesikhala semfundo sokufunda kabanzi ngezimila nezilwane epaki.
Leli dolobha laliyisikhungo samaVictoria lapho kwakukhona khona ukuhweba okuningi ngenxa yokuqhuma kwe-Industrial Revolution. Namuhla singathola imipheme yamaVictoria esasebenza nezindawo zentengiso zokuthenga, manje eseqonde kakhulu kwezokuvakasha. Kepha IRoyal Arcade igalari endala kunazo zonke yalabo abasedolobheni nalowo onesitayela sikanokusho. Ingenye yezindawo ezaziwa kakhulu futhi ekahle ukuthola izinto zokuhlobisa noma izikhumbuzo ezinhle ezijwayelekile zaseWales, ngakho-ke kungaba ngenye yamaphuzu okugcina wokuvakasha oyothenga.
Imakethe Ephakathi YaseCardiff
Uma ufuna funda kabanzi mayelana ne-wales gastronomy futhi ukusuka edolobheni ungaya emakethe emaphakathi. Isakhiwo sesitayela samaVictoria esinophahla lwengilazi sihle kakhulu futhi kuso singathola konke kusuka ezincwadini ezingamasekeni kuye kuzo zonke izinhlobo zokudla.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Yini ongayibona edolobheni laseWales iCardiff
Ama-hacks amahle alula azosindisa usuku lwakho
Ungayinakekela kanjani impilo yesikhumba sakho